September 2019 | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
२० भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य उपचार गरी सिंगापुरबाट शुक्रबार स्वदेश फर्किँदैछन् । उनका प्रेस सल्लाहाकार डा. कुन्दन अर्यालले सिंगापुरबाट थाइल्याण्ड हुँदै अपराह्न थाई एयरवेजबाट प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्कने जानकारी दिए । स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न भन्दै सिंगापुर गएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडल पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै स्वदेश फर्कने छन् । मिर्गाैलासम्बन्धी एण्टिबडीको उपचारका लागि प्रधानमन्त्री ओली गत भदौ ५ गते सिंगापुर गएका थिए । नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा फेरिसिस प्रक्रियामार्फत उनको उपचार गरिएको थियो । सातौं चरणको प्लाज्मा फेरिसिस गत बुधबार सकिएपछि…
२० भदौ, दोलखा । दोलखामा गएराति खोलाले कार बगाउँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जना घाइते भएका छन् । सिंगटीबाट चरिकोटतर्फ आउँदै गरेको बा १९ च ४३९० नम्बरको कार गएराति ११ः३० बजे कालिञ्चोक गाउँपालिका–९ स्थित सुन्द्रावती खोलाले बगाउँदा तामाकोशी गाउँपालिका–३, जफेका २४ वर्षीय अनिश पोखरेलको मृत्यु भएको हो । सोही कारमा सवार तामाकोशी गाउँपालिका–३ का ३१ वर्षीय विकज पोखरेल र लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–२, रामेछापका कार चालक पवन पौडेल पनि कारसँगै बगेका थिए । उनीहरूलाई भने राति नै प्रहरीले उद्धार गरेको छ । विकज नेकपा दाेलखा जिल्ला अध्यक्ष तथा…
२० भदौ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप छनोट फुटबलको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा नेपाल कुवेतसँग ७–० ले पराजित भएको छ । गएराति कुवेतस्थित अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा भएको खेलमा पहिलो हाफमा दुई गोल खाएको नेपालले दोस्रो हाफमा पाँच गोल खायो । तर, नेपालले एक गोल पनि फर्काउन सकेन । फिफा वरियतामा नेपालभन्दा कुवेत चार स्थान माथि छ । तर नेपालले अहिलेसम्म कुवेतलाई हराउन सकेको छैन । यस्तो छ नेपाल-कुवेत प्रतिस्पर्धाको इतिहास नेपालले गत चैतमा कुवेतविरुद्व दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो । पहिलो खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो भने दोस्रो खेल नेपालले…
२० भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा स्कुले छात्रामाथि एसिड प्रहार भएको छ । रेशमकोठीस्थित त्रिभुवन हनुमान उच्च मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत छपकैया-३ निवासी रसुल अलीकी छोरी १५ वर्षीया मुस्कान खातुनमाथि एसिड प्रहार भएको हो । शुक्रबार विहान करिव ६ बजेतिर दुई जना युवाले गणेशमान चोक जाने गल्लीमा उनीमाथि एसिड प्रहार गरेका थिए । गल्लीमा रहेको एउटा सैलुनमा बसेका उनीहरुले खातुनलाई एसिड छ्यापेेर भागेको प्रत्यदर्शीले बताएका छन् । खातुन त्यो बाटो भएर विद्यालय जाने-आउने गर्थिन् । विद्यालय पोशाकमैै रहेको अवस्थामा उनीमाथि एसिड प्रहार भएको हो । एसिडले पोलेर उनी चिच्याउन थालेपछि…
समाचारवीरगञ्जमा स्कुले छात्रामाथि एसिड प्रहारLeaveacomment
काठमाडौं । दशवर्षे जनयुद्धमा घाइते र अंगभंग भएकाहरुको संघर्षको कथा समेटिएको पुस्तक ‘नमेटिने घाउ’ सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पुस्तक लोकार्पण गरेका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्री थापाले जनयुद्धका सहिद, वेपत्ता र घाइते योद्धाको योगदानविना नेपालमा संघीय गणतन्त्र असम्भव रहेको जिकिर गरे । घाइते योद्धा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा जनयुद्धका ३५ जना योद्धाहरुका संघर्षका गाथा समावेश गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विजय साङपाङ्ले जानकारी दिए । कुल २ सय ७० पृष्ठको पुस्तकको समीक्षा नेकपा नेता एवम् लेखक लेखनाथ न्यौपानेले गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश…
रोचकजनयुद्धका घाइतेको कथा ‘नमेटिने घाउ’ सार्वजनिकLeaveacomment
झुपुकझुपक निद्रा लाग्छ ? मुटु जचाउनुहाेस् !
एजेन्सी— यदि तपाईंको मुटुमा केही समस्या आयो भने के पहिले यसबारे थाहा होला ? सबैलाई थाहा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, केही समस्याहरुबारे चाहिँ पहिले नै थाहा पाउन सकेमा राम्रो हुन्छ । किन पनि भने यसले मुटुलाई कस्तो असर गरिरहेको छ भन्ने जानकारी दिन्छ र हामीले समयमा नै चेकअप गर्न सक्छौँ । मुटुसम्बन्धी केही समस्या हुनसक्ने खतराका लागि यी लक्षणबारे जानकारी राखेर समयमा नै सचेत हुनुपर्छः १. छातीमा समस्या छातीको अवस्था सामन्य छैन वा केही समस्या महसुस भइरहेको छ भने यो मुटुसम्बन्धी केही समस्या भएको छनक हुनसक्छ । यदि…
जीवनशैलीझुपुकझुपक निद्रा लाग्छ ? मुटु जचाउनुहाेस् !Leaveacomment